Ukukhethwa kokudibanisa iintambo zokubopha izithuthi
Ukukhethwa kwezihlanganisi zokubopha iintambo zezithuthi Isinxibelelanisi yinxalenye ebalulekileyo yeentambo zokubopha iintambo, ezisetyenziselwa ukudibanisa nokukhusela iihashe zokubopha iintambo. Ukuqinisekisa ukuhanjiswa kwamandla kunye neempawu, ukhetho lwezihlanganisi lubaluleke kakhulu. Eli nqaku lazisa ngononophelo ...
Isingeniso solwazi lokuqhagamshela kunye nembali yophuhliso lwayo
Izihlanganisi zombane ezahlukeneyo zizinto eziphambili kwizixhobo ezingenakubalwa ze-elektroniki kuba banokuqonda kwaye bakhusele ukuhanjiswa kweempawu zombane. Ukusuka ekunxibelelaniseni izinto eziphambili zekhompyuter kunye nokudibanisa iingcingo kwiimoto esiziqhubayo, badlala uluhlu olubanzi lweendima, kunye nokusetyenziswa kwe ...
Ulwazi olusisiseko loyilo lokubopha iintambo zombane ngo-20200914
Ulwazi olusisiseko loyilo lokubopha iintambo zombaneUkubopha iintambo zeemoto ngowona mzimba uphambili wesekethe yemoto, kwaye akukho setyhula yemoto ngaphandle kwentambo yokubopha iintambo. Okwangoku, nokuba yeyokuphakama kwemoto ephezulu okanye imoto yoqoqosho eqhelekileyo, uhlobo lweentambo zombambo ...
Intlanganiso ye-VS ucingo lwentambo
I-Cable Assembly. Intambo yokubopha Amagama athi "indibano yekhebula" kunye "nentambo yokubopha intambo" zihlala zisetyenziswa ngokungafaniyo. Ngapha koko, amagama athi "intambo" kunye "nocingo" nawo asetyenziswa ngokungafaniyo. Kodwa, le yeyomntu olele yedwa. Iingcali kunye nabo bazi malunga nobuchwephesha bala macandelo, zonke iiths ...
Iintambo zokubopha iiHold Connector kunye neeTheminali - Ukwenza i
Izihlanganisi ze-rness kunye neeTheminali - Ukwenza ukhetho oluchanekileyo Intambo yokubopha intambo licandelo eligcina iingcingo zombane ezifanayo ezihambisa imiqondiso okanye amandla; iingcingo zibotshwa kunye ziiteyiphu zombane, imijelo yamanzi, umtya, okanye okunjalo. Kodwa, ezi ntambo zokubopha ucingo aziloncedo ukuba ...
KUTHENI IINTSIMBI ZENTSIMBI EZIXAKIWEYO ZINGAZIZALISWA NGOKUPHELELEYO
Xa sicinga ngokuveliswa kwi-21st Century, sibonisa oomatshini abazenzekelayo bekhupha ngokukhawuleza iimveliso ezintsha ngokulula. Ke kutheni le nto inkqubo yokuveliswa kwentambo yokubopha ingabinakho ukuzenzekelayo nayo? Ukuphendula lo mbuzo, kufuneka singene ngaphantsi ...
Intambo yokubopha intambo yenzelwe ukwenza lula ukwenziwa kwento enkulu, kwaye iyilelwe ngokusekwe kwiimfuno zejiyometri kunye nezombane zezixhobo ekufuneka ifakwe kuyo. Iihadi zeengcingo zihlala zisetyenziswa kumzi mveliso we-elektroniki, umatshini ...
Kunyaka omnye, izigidi zeemoto zenziwe kwihlabathi liphela.
Kunyaka omnye, izigidi zeemoto zenziwa kwihlabathi liphela. Ngelixa izitayile, iinxalenye kunye neempawu zinokwahluka, zonke izithuthi zifuna ukubotshelwa ngocingo. Iharness idibanisa iintambo kuyo yonke imoto, inika amandla yonke into ukusuka kumbane wokuhamba kunye nezibane zangaphambili ukuya kwi-dash ...
I-OLINK NEW TECHNOLOGY NEWS ---- YINTONI UBUCHWEPHESHE BOKUSHINTSHA? Iintambo zokubopha iintambo ziindibano ezineentambo ezininzi eziphelisiweyo ezisikiweyo okanye eziboshwe kunye. Ezi ndibano ziququzelela ukufakwa ngexesha lokuveliswa kwesithuthi. Ba ...
Uqeqesho lweCable kunye neWare
Esi sisingeniso kwikhebula BEST kunye nezandla zokubopha ngocingo kwiklasi yendibano. Esi sisandla eklasini esinokuthi abakhi beentambo zokubopha bongeze kulwazi lwabo lweenqobo zokuhlola ezingama-620 okanye bakwazi ukuqeqesha abasebenzi abatsha ngeendlela ezifanelekileyo zokusika, ukuhluba, ukuhluba kunye nokudibanisa ...